» बालचन्द्र, शोभा, चिज र देवीको संघर्षको कथा
बालचन्द्र, शोभा, चिज र देवीको संघर्षको कथा
१९ भाद्र २०७८, शनिबार १८:२०
चन्द्र घलान, मकवानपुर, १९ भदौ । नेपालकै चर्चित दोहोरी रियालिटी शो ‘दोहोरी च्याम्पियन’ को उत्कृष्ट ८ का लागि अन्तिम दोहोरी भिडन्त निक्कै रोचक रह्यो । आठौँ अर्थात अन्तिम दोहोरी भिडन्तमा चिज गुरुङ र देवी आलेसँग बालचन्द्र बराल र शोभा कार्कीले दोहोरी भिडेका थिए । गत हप्ता भएको यो दोहोरी भिडन्तमा चिजलाई निर्णायक सिता थापाले फो स्टार र अन्य तिनै जना निर्णायकहरुले फाईभ स्टार प्रदान गरेका थिए । दोहोरी च्याम्पियनको ईतिहासमै ३ जना निर्णायकहरुले फाईभ स्टार दिएको यो पहिलो घटना हो । तसर्थ चिज सबै निर्णायकको रोजाईमा परेका छन् । त्यस्तै देवीले तिन जना निर्णाकहरुबाट फो स्टार र एक जना निर्णायकबाट थ्री स्टार प्राप्त गरेकी थिईन् । बालचन्द्रले सबै निर्णायकहरुबाट फो स्टार प्राप्त गरेका थिए भने शोभाले दुई जना निर्णायकबाट फो स्टार र दुई जनाबाट थ्री स्टार प्राप्त गरेका थिए । निर्णायकहरुले स्टारसँगै गोप्य रुपमा दिएका अंक र दर्शक भोटका आधारमा यो साता एक टिम उत्कृष्ट ८ का लागि छानिने छन् । यी दुई जोडीको यो कडा प्रतिस्पर्धामा कसले बाजी मार्ला त ? आखिर को जानेछ उत्कृष्ट ८ मा ? तपाईको विचारमा यी दुई जोडीमध्ये कुन जोडीको जित्ने सम्भावना बलियो छ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस भिडियो सामग्रीमा हामी यी नै ४ कलाकारहरुको जीवनको कथा तपाईहरुसामु बाँड्दैछौँ ।
दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट १६ मा पुगेका पाँचौँ जोडी हुन् चिज गुरुङ र देवी आले । उत्कृष्ट २४ को दोहोरी भिडन्तमा उनीहरुले निर्णायकहरुबाट जम्मा ५८४.५ अंक प्राप्त गर्दै १०.५ अंकले भिडन्त जितेका थिए । चिज र देवी दोहोरी च्याम्पियन अगावै चर्चामा आईसकेका जोडी हुन् । उनीहरु लाईभ दोहोरीमा चर्चित छन् । उनीहरु दोहोरी गायक गायिका समेत हुन् । गायक चिज गुरुङ गोरखा निवासी हुन् । सानैदेखि गीतसँगीतमा रुचि राख्ने गरेका चिज ठूलो भएर पनि गीत सँगीतकै क्षेत्रमा लाग्ने चाहाना राख्ने गर्थे । उनको चाहानाले नै उनलाई संगीत क्षेत्रमा डोराएको थियो । वि.सं. २०६५ सालमा एसएलसी सकिएपछि काठमाडौँमा आएका चिजले संगीतलाई आफ्नो करियर बनाएका छन् । उनी आफैले रोजेको क्षेत्रमा लाग्न पाउँदा खुशी लागेको बताउँछन् ।
गायक चिज गुरुङसँगै जोडी बाँधेर दोहोरी भिडिरहेकी देवी आले गोरखाको थुमी ३ स्वाँरा गाउँ निवासी हुन् । ४ दिदीबहिनी र आमाबुवागरी ६ जनाको परिवारमा हुर्किएकी देवीका ३ बहिनीहरु छन् । सानैदेखि गीतसँगीतमा रुचि राखेकी देवी रेडियोमा गीत सुन्दै अगाडि बढेकी थिईन् । मेलापातमा जाँदा समेत गीत गाउँदै संघर्ष गरेकी देवी अहिले लोकदोहोरी गायनमा चिनिएकी नाम हुन् ।
दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट १६ मा पुगेका चौथो जोडी हुन् शोभा कार्की र बालचन्द्र बराल । यसअघि उत्कृष्ट २४ को दोहोरी भिडन्तमा उनीहरुले निर्णायकहरुबाट जम्मा ६०४ अंक प्राप्त गर्दै ५ अंकको अन्तरमा जित हासिल गरेका थिए । बालचन्द्र र शोभा लाईभ दोहोरीमा चर्चामा रहेका नाम हुन् । उनीहरु परिचित गायक गायिका समेत हुन् । गायिका शोभा कार्कीको माईती म्याग्दीमा पर्छ भने उनको घर गुल्मीमा पर्छ । वि.सं. २०६८ सालदेखि गायन क्षेत्रमा लागेकी उनले एक दशक यो क्षेत्रमा बिताईसकेकी छिन् । शोभाको श्रीमान नेपाल आर्मीमा कार्यरत छन् । उनको बुवा, सानी आमा र दुई भाईहरु पनि छन् ।